Ny sasany fampiharana dia manomboka manolotra widget XL ho an'ny iPadOS 15 | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 24/09/2021 20:00 | Fampiharana iPhone, iOS 15
iPadOS 15 dia nampitombo ny vokatra ny rafitra fiasa mikasika ny iPadOS 14. Ny fampidirana ny tranomboky fampiharana na multitasking nohavaozina dia nahatonga ny fiasan'ny iPad ho mahomby kokoa ary miaraka amin'izay haingana sy mahasoa kokoa ho an'ny mpampiasa. Ny zava-baovao iray hafa koa dia tonga Widget XL, lehibe kokoa izay ahafahana mampiseho fampahalalana misimisy kokoa amin'ny karazana rehetra ary afaka mamorona ny developer ho an'ny fampiharana azy ireo. Raha ny tena izy, fampiharana marobe no manavao sy mamoaka ny widget-dry zareo amin'ny endrika XL toy ny Things 3, Weather mahatalanjona na CARROT.
Votoatiny bebe kokoa amin'ny widget XL ho an'ny iPad amin'ny iPadOS 15
Afaka mametraka widgets eo anelanelan'ny apps amin'ny iPad-nao ianao izao. Izy ireo koa dia misy amin'ny habe lehibe kokoa hanararaotra ny efijery.
Ny zavatra 3 dia iray amin'ireo fampiharana mamokatra be indrindra ao amin'ny App Store. Andro vitsy lasa izay dia nohavaozina ho amin'ny kinova 3.15 ary nampidirina endri-javatra vaovao ho an'ny fitaovana miaraka amin'ny iOS 15 sy iPadOS 15. Ireo widgets XL ho an'ny iPad dia misy ao amin'ity kinova ity. Momba ny widget ity avy eo ary ny iray kosa manolotra lisitra tokana hahitana votoaty misimisy momba ny lisitray.
Raha atao indray mipi-maso fotsiny dia afaka mahita ny lisitray manaraka ny efijery isika ary miditra amin'izy ireo ary mifanerasera amin'ireo zavatra avy amin'ny efijery an-trano. Ho fanampin'izany, ireo widgets ireo dia azo ovaina amin'ny lohahevitry ny Lohany na miditra mivantana amin'ny famoronana asa vaovao.
Zavatra 3€ 9,99
YouTube koa dia nanambara ny widget XL ho an'ny iPadOS 15. Ankoatra ny YouTube dia mahazo widget Google Photos vaovao ihany koa izy ireo. Ho hita izy ireo amin'ny andro ho avy ary hanana fampiasa mitovy amin'ireo efa misy ankehitriny fa amin'ny habe lehibe kokoa. Raha ny amin'ny YouTube, mamela antsika hiditra mozika, mpanakanto ary rakikira nihaino vao tsy ela akory izay. Raha ny Google Photos dia azontsika atao ny manana ireo sary tadiavintsika amin'ny habeny mba hanomezana touch of personalization ny iPad.
Nahazo widgets vaovao ihany koa ny apps Flexibits. Amin'ny tranga Fantastical, azonao atao ny miditra amin'ny kalandrie lehibe kokoa misy fizarana manokana izay hisehoan'ny hetsika rehetra voamarika amin'ny sokajy sy kalandrie mifanaraka aminy. Ho fanampin'izany, mamela ny fidirana amin'ny fivoriana telematika izy miaraka amin'ny tsindry bokotra.
Miaraka amina kaody miloko, Fantastical dia mamela anao handamina ny andro amin'ny herinandro mifototra amin'ny hetsika azonao sy ny fahasarotanao mandritra ireo andro ireo. Amin'ireto widgets XL ireto dia azo idirana mora sy ara-pahitana ity atiny ity.
Farany manana toetr'andro CARROT izahay, fampiharana hafa hanamarinana ny toetr'andro. Amin'ny alàlan'ny sary sy sary masina amin'ny karazany rehetra dia natao hanomezana ny toetr'andro tanteraka. Miaraka amin'ny fanavaozana vaovao, widget roa XL no nampiana izay afaka manatsara ny asany miaraka amin'ny fampahalalana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny famandrihana Premium sy Ultra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny fampiharana sasany dia manomboka manolotra widget XL ho an'ny iPadOS 15